काठमाडौं Archives - Nepalpatra
काठमाडौंमा आज थपिए कोरोनाका ३ जना नयाँ संक्रमित
काठमाडौं, असार १२ । काठमाडौंमा आज शुक्रबार थप ३ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले मन्त्रालयमा हुने नियमित पत्रकार ब्रिफिंगमा सो कुराको जानकारी दिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा ३ […]
काठमाडौँ, असार ७ । आज असार ७ गते आइतबार आषाढ कृष्ण औँसीका दिन लाग्ने सूर्यग्रहण हालै नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट ९८ प्रतिशतसम्म सूर्य ढाकिएको देखिनेछ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रबाट नेपालमै सबैभन्दा धेरै ९८ प्रतिशतसम्म सूर्य ढाकिएको देखिने वरिष्ठ खगोलविद् एवम् वाल्मीकी विद्यापीठ ज्योतिष विषयका सहप्राध्यापक जयन्त आचार्यले जानकारी […]
आज एकैदिन ८३ जनामा कोरोना संक्रमण, काठमाडौं र भक्तपुरमा पनि भेटिए संक्रमित
३० वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा आज कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण फेरि थप नयाँ २६ जनामा पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २१७ पुगेको छ । साथै काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौंकी ३३ वर्षीया महिला १ जना र भक्तपुरमा २५ वर्षीया महिला र २७ वर्षीय पुरुष गरी २ जनामा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ । […]
लकडाउनको बेला काठमाडौंबाट मजदुर लिएर दोलखा जाँदै गरेको बस रामेछापमा दुर्घटना
१० वैशाख, काठमाडौं । लकडाउनको बेला काठमाडौँमा बस्नुभन्दा आफ्नै घर फर्किनेको संख्या बढिरहेको छ । जसअनुसार काठमाडौंबाट मजदुर लगेर दोलखा जाँदै गरेको बस रामेछाप जिल्लामा दुर्घटना हुँदा झण्डै १ दर्जन घाइते भएका छन् । ३९ जना सवार यात्रु सवार बा २ ख ६८१८ नम्बरको उक्त बस आज बुधबार बिहान ४ बजे मन्थली नगरपालिका-६ मा दुर्घटना […]
कथा – लकडाउन खुल्दा
भोली लकडाउन खुल्ने भन्ने सरकारको निर्णयले खुशीको सीमा रहेन । कोभिड-१९ ले घरमै बन्दी बनाएर राखेको आज ठिक २ महिना पूरा भएको थियो । टेलिभिजन, अनलाइन न्युज, सामाजिक सन्जाल सबैतिर यस विषयकै चर्चा थियो । करागारमा बन्दी रहेको कैदी समयावधि समाप्तिसँगै छुट्नु अघिको खुशी मिलेको आभाष भइरहेको थियो । समाजिक सन्जाल पनि राम्रैसँग तातेको थियो […]
चितवनका २ वटा नमूना शंकास्पद, परीक्षणका लागि पठाइयो काठमाडौं
चितवन, ५ वैशाख । भरतपुर कोभिड-१९ प्रयोगशालामा परीक्षणका क्रममा जिल्लाका २ वटा नमूना शङ्कास्पद देखिएपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, काठमाडौँ पठाइएको छ । बिहीबार भरतपुर कोभि-१९ परीक्षण प्रयोगशालामा गरिएको पिसीआर परीक्षणमा दुई जनाको नमूना शङ्कास्पद देखिएको भरतपुर अस्पतालले जनाएको छ । बुधबार र्यापिड डायग्नोष्टिक टेष्टका क्रममा एक महिलाको शङ्कास्पद नतिजा आएको थियो । उनी र […]
काठमाडौँमा लकडाउन उल्लघङ्न गर्ने २४०० जनालाई कारवाही
काठमाडौँ, २ वैशाख । काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन उल्लघङ्न गर्ने २ हजार ४२७ लाई आज कारवाही गरिएको छ । आज दिनभर उपत्यकाको विभिन्न क्षेत्रमा लकडाउन उल्लङ्घन गरेका ५५९ महिलासहित उनीहरुलाई कारवाही गरिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ । सोही क्रममा ३२० दुई पाङ्ग्रे र ५० वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ […]
२७ चैत, काठमाडौं । नेपाल सरकारले लकडाउनका कारण काठमाडौं उपत्यकामा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई शुक्रबार र शनिबार उपत्यका बाहिर जान दिने भएको छ । आज बिहिबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बसेको सरोकारवालाहरुसँगको बैठकले भोलि र पर्सि बाहिर जान दिने निर्णय गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्री, संघीय मामिला तथा स्थानीय […]
काठमाडौँ, २२ चैत । महामारीका रुपमा विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड-१९ को जोखिमका कारण यतिखेर विश्वका २०० भन्दा बढी मुलुक प्रभावित छ । छिमेकी मुलुकहरुमा फैलिएको रोगको सङ्क्रमण नेपालमा पनि बढ्नसक्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको चेतावनी दिइसकेको छ । रोगबाट मुलुकलाई जोगाउन सरकारले अन्त्यावश्यक बाहेक बाहिर ननिस्किन जारी गरेको आदेश ‘लकडाउन’ को आज ११औँ दिनसम्म मानिसको आवाजावत ठप्प […]
काठमाडौं, माघ १ । आज माघेसङ्क्रान्ति अत्यधिक तरुल खपत हुने दिन । यसका लागि काठमाडौँका बजारमा सिमल तरुल, हात्तीपाइले तरुल, घर तरुल, वन तरुल, सिमल तरुल र पानी तरुल भित्रिएको छ । देशकै ठूलो तरकारी बजार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा तरुल किनबेच गर्नेको भीड लागेको छ । माघेसङ्क्रान्तिकै अवसर पारेर अत्यधिक बिक्री हुने गरेकाले […]
काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग : पुल र टनेलको काम यसै वर्षबाट
२० कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौँ–तराई जोड्ने निर्माणाधीन द्रुतमार्गमा पर्ने पुल तथा टनेलको निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने भएको छ । यस द्रुतमार्गमा निर्माण गरिने विशेष प्रकृतिका पुल तथा टनेलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी चयन गर्न मङ्सिर १ गते ‘प्रिक्वालिफिकेसन’ बोलपत्र गरिने भएको छ । साधारण प्रकृतिका पुल निर्माणका लागि भने स्वदेशी कम्पनी चयन […]
दिपावलीमा बेहुली झैँ सिंगारिएको काठमाडौँ (फोटो फिचर)
कात्तिक १०, काठमाडौं । हिन्दु नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो चाड तिहारमा झिलिमिली बत्तीले काठमाडौं उपत्यका रातिमा पनि बेहुली झैँ सिंगारिएर उज्यालो देखिएको छ । आज तिहारको तेस्रो दिन घर-घरमा धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिएको छ । घर-घरमा विभिन्न किसिमका बत्तीहरु बालिएकोले गर्दा पूरै राजधानी काठमाडौँ रंगीचंगी देखिएको छ । देश लोडसेडिङमुक्त भएपछि तिहार झनै उल्लासमय […]
दरबार मार्गको क्लब भिक्ट्रीमा भिषण आगलागी
असोज २६, काठमाडौँ । आज दशैंको अन्तिम दिन काठमाडौंको दरबार मार्गको क्लब भिक्ट्री (डान्स रेष्टुरेन्ट) मा भिषण आगलागी भएको छ । आगोलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको छ । आगो के कारण लाग्यो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन । आइतबार साँझदेखि भएको आगलागी नियन्त्रणमा लिन काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल प्रहरीको दमकल खटिएको छ । अहिले दुईवटा दमकल […]
काठमाडौं उपत्यकामा कसरी हटाउने ट्राफिक जाम ?
१९ जेठ, काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार उपत्यकामा मात्र दैनिक करिब १२ लाख सवारी साधन गुड्छन् । जुन सडकको क्षमताभन्दा बढी हो । सडक फराकिलो बने पनि धेरै ठाउँमा जाम उस्तै छ । विकल्प के छ ? सुरुङमार्ग, अन्डरपास वा फ्लाइ ओभर । विकल्प खोज्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ०७६/७७ को बजेट भाषणक्रममा बढी जाम हुने […]
ताप्लेजुङबाट सवै शव लिएर काठमाडौं उड्यो हेलिकोप्टर (तस्वीरसहित)
फागुन १६, काठमाडौ । दुर्घटनामा परी निधन भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहितको सातै जनाको शव बोकेर ताप्लेजुङबाट सेनाको हेलिकप्टर काठमाडौका लागि भर्खरै उडेको छ । सुकेटार विमानस्थलबाट सवैको सव बोकेर सेनाको हेलिकोप्टर केहीबेर अघिमात्रै उडेको एक नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी केदार रिजालले जानकारी दिए । सातै जनाको शव लिन सेनाको […]
१२ वर्षपछि घेरियो हिउँले काठमाडौं (फोटो फिचर)
फागुन १६, भक्तपुर । १२ वर्षपछि हिउँले काठमाडौं घेरियो । भक्तपुरको नगरकोट, चाँगुनारायण, सुडाल, ताथली, चित्तपोल, नंखेल, सिपाडो, नलिन्चोक, गुण्डु, रानीकोट, घ्याम्पेडाँडालगायतका क्षेत्रमा हिमपात हुँदा चिसो बढेर जनजीवन प्रभावित भएको छ । भक्तपुर, मध्यपुर थिमि, चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नगरपालिकाका शहरी क्षेत्रमा समेत हिमपात भएको छ । उपत्यकाका काठमाडौं र ललितपुरमा समेत हिमपात भएको छ । हिमपातका […]
त्रिशूली–काठमाडौँ २२० केभी प्रसारण लाइनको तार विस्तार शुरु
७ कात्तिक, बेत्रावती । निर्माणाधीन त्रिशूली–काठमाडौँ २२० केभी ‘डबल सर्किट’ प्रसारण लाइनका लागि विद्युतीय तार तान्न थालिएको छ । नुवाकोटको सूर्यमतीदेखि थानसिंहसम्मका खम्बामा मङ्गलबारदेखि तार तान्न थालिएको ‘माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख फणिन्द्रराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा सूर्यमतीबाट चतुराले हुँदै थानसिंहसम्मको खम्बा नं २४.१ देखि २९ नं सम्म ठेकेदार कम्पनी […]
भ्यू टावर बनाउन समय थपिँदै
२४ साउन, काठमाडौँ । काठमाडौँ भ्यू टावर(दृश्यावलोकन स्तम्भ) निर्माणका लागि पहिलो चरणको सयम सकिनै लाग्दासम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन । काम नभएपछि समय थप्ने तयारी काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको छ । सम्झौतानुरुप आगामी भदौ १० गतेदेखि पहिलो चरणका लागि कामपाले दिएको समय सकिँदैछ । समय सकिन लागे पनि निर्माणको काम अघि बढेन । “नियमअनुसार निर्धारित समयमा […]